Sidee Si aad Ammaan Iyadoo Wadista Inta lagu jiro Jiilaalka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Sidee Si aad Ammaan Iyadoo Wadista Inta lagu jiro Jiilaalka
Winter waa markii ugu fiican si ay u dhisaan dababka qodxo, si nabad ah ku dhacay dhaadhacyadii, dhiso snowmen iyo snuggle la koob fiican shaah. Nasiib darro, ma ahan oo dhan xiiso leh iyo ciyaaraha. Winter sidoo kale abuuraa qaar ka mid ah wadooyinka ugu Khaa'imiinta xaaladaha. Maxaa yeelay, ma ahan suurtagal ah in inta badan oo naga mid ah in ay qoboobaha ilaa guga, halkan waa talooyinka aad u baahan tahay oo ku saabsan sida si ammaan halka baabuur-wadidda xilliga jiilaalka.
Driving Safe? Numbers Ha jiifso
Qabaa inaan isagoo walaac ka muujiyeen idin siinayo talooyin ku saabsan Sidee si ammaan halka baabuur-wadidda inta lagu guda jiro Winter? Sida laga soo xigtay AAA, duufaanada qabowga, cimilo xun, iyo xaaladda waddada daadsan yihiin qodob in ku dhowaad nus milyan shilalka iyo in ka badan 2,000 dhimashada wadooyinka qaboobe kasta.
Boorso Qalabka degdegga ah ee aad Travel Car
Mararka qaar, aad dooneynin in uu sii joogo amaan halka baabuur-wadidda inta lagu guda jiro jiilaalka Waa kuma filna. Waxaan jeclahay in aan ku nool nahay oo taabaneysey, 'Rajaynaynaa ugu fiican, diyaariyaan for 'ugu xumaa. Hubi in aad gaariga waa qalabeeyay sahay haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah. Ku dar buste diiran, dhar diiran, qalabka gargaarka degdegga ah, toosh ama ku haya, xadhkaha kicinta, xoqo baraf ah, majarafad a, ciid ama qashin kitty inuu idin siiyo jar, iyo baraf silsilado. Sidoo kale waa inaad biyo qaar ka mid ah fuliyaan, sahayda cuntadabaararka -like tamarta ama isku darka-iyo raad xeedho telefoonka!
Florence si Tareenadu Levanto
Florence si Tareenadu La Spezia
Rome si ay Tareenadu La Spezia
Rome si ay Tareenadu Levanto
Ka hubi Barafkaaga Muraayadahaaga Si aad Amaan u Ahaato Intaad Gaari Wireysid
Tani waa tip wadidda jiilaalka ah in xirfadle muddo dheer shixnad darawallada u isticmaalaan si loo ogaado haddii ay xaaladda waddada waa baraf. Kormeer aad muraayadaha ka baxsan. Haddii baraf ayaa la bilaabo si ay u sameeyaan on muraayadaha, taasi waa tilmaame wanaagsan baraf in waxa kale oo la xirrira on waddooyinka. Qaata Digtoonidiinna Duulana dheeraad ah si ammaan halka baabuur-wadidda ama ay sugaan ilaa iyo inta uu kor u kulaalaa in la wado.
Paris si ay Tareenadu Rotterdam
Eryi Safe iyo Leave Hore!
Tani waxay u muuqan yaabaa in la midbaa mid cad, laakiin waxaynu og nahay in aad mashquul iyo danayn si aad u hesho si aad u socoto ee soo socota tahay. Waxaan halkaan u joognaa inaan idin xusuusiyo in ay qaataan waxa ay u yarayso! Mid ka mid ah talooyinkeena ugu muhiimsan Sidee si ammaan halka baabuur-wadidda xilliga jiilaalka ogolaanaya waqti dheeraad ah si ay u yimaadaan aad u socoto. safarada qaadan kartaa waqti dheer inta lagu jiro xilliga qaboobaha badan xilliyada kale ee sannadka ka, gaar ahaan haddii aad la kulanto xaaladaha duufaan ama waddooyin baraf. Iyo baabuur-wadidda in hawadu xumaato waa walaac ku filan oo aan cadaadis ku daray inay noqoto mid soo daahay, oo hadhaysaa laga yaabaa in aad xukun driving ammaan.
Eryi Safe iyo yareyn lahaa ka jeedsiga
Sidee si ammaan halka baabuur-wadidda inta lagu guda jiro Winter #1 tip: Ku rid hoos aad telefoon! Ka dhig telefoonka demiyo ama ku xiran baabuurka Bluetooth-iyo Gacmihiinna off wheel ama indhaha marnaba iska wadada si aad u hubiso in WhatsApp fariin.
Joog Safe Iyadoo Driving Means Dhegayso Road ah!
No, maqlina qalbigaaga. waqti ma aha si kasta. Dhegayso wadada. Suugaan. Taayirada sameeyaan dhawaaqyo kala duwan markii baabuur-wadidda on barafka iyo barafka, taas oo sabab kale si aad mugga radio hoos ammaanka jiilaalka baabuur-wadidda. qaylada wadada Snowy waa in ay xad cod weyn, maxaa yeelay barafka waa la laaday. Haddii qaylada weyn ku si lama filaan ah istaago, aad guurtay yaabaa in ay ka barafka barafka. Soco in u dhawaajiyaan taayir aad wadada si ay u sii on top of xaaladda waddada in inta badan si deg deg ah u beddeli, gaar ahaan inta lagu jiro ama isla markiiba ka dib duufaan.
Ka hortagga barafowga haddii aad dooneysid inaad amaan ahaatid adoo gaariga wada
Sida loo joog Safe Iyadoo Wadista Inta lagu jiro Jiilaalka? Hubi in dheecaanka caleemaha masaxa daaqadda aad ku jira anti-hakinta, si buufiyo ee ma talaagada ilaa hawo qabow. Tixgeli iibsiga masaxa qaboobaha, kaas oo looga hortago iyo baraf ka adkaansho on caleemaha masaxa daaqadda ka!
Waxaan soo raacay talooyin iyo weli helay xayiran
Mararka qaar, waxyaalahaas laga fogaadaa iyocadhadii. Haddii aad uga istaagi barafka halkan waa qaar ka mid ah siyaabaha si degdeg:
Joog gaadiidkaaga: Your gaariga bixisaa hoy ku meel gaar ah oo waxay kuu sahlaysaa for samatabbixiyeyaasha in ay aad u heshaan. Ha isku dayin inaad ku socotaan ka duufaan aad u daran. Waa ay fududahay in ay lumiyaan hortiisa aad gaariga ku qarxiyaan barafka iyo noqdo lumay.
Ha is-daalin: Marka qodaya soo baxay gaadiidkaaga, listen to jirkaaga iyo joojiyo haddii aad daalan noqday.
Noqo Muuqata: Ku dheji maro midab dhalaalaya anteenada gaarigaaga ama ku dheji maro dusha sare ee daaqada la duubay si aad u muujiso culeyska. Habeenkii, sii iftiinka Xamar on haddii ay suuragal tahay. Waxaa isticmaalaa oo kaliya qadar yar oo ah korontada iyo ka dhigi doonaa fududeeyo samatabbixiyeyaasha in aad ka heli.
Nadiifi egsaaska: Hubi biibiile qaaca aan la dhaafiyay baraf, baraf, ama dhoobo. A biibiile dhammayn xirmo wuxuu keeni karaa gaaska carbon monoxide dilaaga ah inay daadato galay qol rakaabka gaariga halka engine la socda.
joog diiran: Isticmaal wax kasta oo la heli karo si jirkaaga dahaar ka qabow ah. Tani waxay ka mid noqon kara sariiro dabaqa, wargeysyada, ama khariidado waraaqo ah. Pre-pack bustayaal iyo dhar culus ay u isticmaalaan in ay dhacdo xaalad degdeg ah.
dhowraan Shiidaalka: Haddii ay suurtagal tahay, kaliya ay maamulaan ee engine iyo kululeeyaha dheer oo ku filan inay ka soo saarto qaboowga ah. Tani waxay kaa caawin doontaa in ay dhowraan shidaalka.
Car safarka? Iska indha wax kasta oo aan kaliya ku yidhi
Maxaa dhacaya haddii ay ahayd hab aad ka fogaato lahaa dhammaan kaaftoomi kor ku joogista ammaan ah halka baabuur-wadidda? Haddii kaliya waxaa jiray hab ka mid ah gaadiidka oo aad ku boodaan yaabaa gal, iyo si dhakhso ah u hesho si aad u socoto iyo safarto si nabad ah. Oh sugaan, waxaa jira! Waxaa loo yaqaan tareen!
Waa run in baabuurta bixiyaan xoriyadda in yar oo kale hababka gaadiidka sameeyo. Waxaad ku safri kartaa haddii kale gaari wadooyinka xeebaha, madaxa tuulooyinka fogfog, iyo welwelina jadwalka ama kuraasta iibinta baxay. Iyagu ma ay tahay iyada oo aan ceebaha ay, si kastaba ha ahaatee. Eeg sababo badan oo kor ku xusan!
Tareenadu waa ammaan iyo si dhakhso ah! Sidaas looma baahna in ay sii joogaan amaan marka aad gaadhiga waddo haddii aad tabobaro safarka, sidoo kale Tareenada badan yihiin la awoodi karo, gaar ahaan haddii aad isticmaalayso Save A tareenka inay jartaan tikidhka tareenka aad. Ma u baahan tahay wax qancin? Waxaan qoray blog a dhan ku sababta safarka tareenka ka sareeyaa safarka wadada.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsafe-driving-during-winter%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#nabadgeliyada #safarka #xilliga qaboobaha europetravel Tranride
Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe